Xog yaab leh: Cabdi Weli Gaas oo dib usoo celinaya wasiiradii uu baarlamanka ceyriyey - Caasimada Online
Home Warar Xog yaab leh: Cabdi Weli Gaas oo dib usoo celinaya wasiiradii uu...
Xog yaab leh: Cabdi Weli Gaas oo dib usoo celinaya wasiiradii uu baarlamanka ceyriyey
Garoowe (Caasimada Online) – Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay in la filayo dhowaan in Madaxweyne Cabdiweli Maxamad Cali Gaas dib u soo magacaabo inta badan gollihii wasiirada Puntland ee kalsoonida dhowaan ay kala noqdeen xildhibaanada Barlamanka.
Wararka ayaa sheegaya in xildhibaanada Puntland olole ugu jiraan sidii dib loogu soo celin lahaa qaar ka tirsan wasiirada ay isku beesha yihiin.
Olalahaan ay bilabeen xildhibaanada Puntland qaarkood kaasoo sababey in mudanayal kale ka caroodaan kuwasoo ka shaqeeynaya sidii wasiirada la jifida ah u soo noqon lahaayeen ayaa waxay rajo fiican galisey Madaxweyne Gaas.
Xildhibaan ka tirsan Barlamanka Puntland oo diidey magaciisa in aan xusno ayaa sheegey in Wasiiradii hore ee kalsoonida laga qaadey kulamo gaar ah la leeyihiin mudanayasha ay isku beelaha yihiin kuwasoo ka codsanaya in Madaxweyne Gaaa ugu tagaan si loogu soo daro golaha cusub ee la magacabayo.
“In golaha Wasiiradii hore intooda badan soo noqonayan waxa markhaati ka ah Madaxweynaha Puntland waxaa uu wataa qayb mid ah golahii wasiirada hore in uu dib u soo celiyo halka xildhibaanada Barlamanka dabada ka riixayaan kuwo kale” sidaas waxaa sheegey mid ka tirsan xildhibaanada Puntland oo diidey magaciisa in aan xusno.
Barlamanka Puntland ayaa qaybo kamid ah ee shacabka iyo siyaasiyiinta gobolka qaar kamid ah waxay ay rumeysan yihiin in iyadoo qodobkaas uu Dastuuri ahaa balse in si wadarjir ah kalsoonida lagala noqdo golaha wasiirada aheyd talaabo siyasadeed kadib markii Madaxweyne Gaas mudanyaasha aqalka isku fahmi waayeen arimo dadweynaha ka qarsoon.
Barlamanka Puntland oo kalfahdigiisu ku eg-yahay bisha July dhamaadkeeda ayaa la filayo in maalmo dib loo dhigo si Madaxweynaha fursad loogu siiyo in golihiisa wasiirada cusub soo magacaabo.
Barlamanka Puntland ayaa 27/07/2017 ansaxiyey heshiisyo dowlada Puntland la soo gashay shirkado shisheeye kuwasoo la maleynayo in saldhig u ahaayeen khilaaf la xaliyey oo sababey in golaha wasiirada la eryo.